Kufananidza kwemakamera pakati peiyo iPhone 7 Plus uye iyo Galaxy Note 7 | IPhone nhau
Ignacio Sala | | Kupikisana, iPhone 7
Imwe yenyaya dzakakosha kwazvo idzo nyowani iPhone 7 Plus yatiunzira ndiko kusimbiswa kweguhwa iro rakaratidza kuti rinogona kushandisa kamera mbiri, mbiri kamera inotiratidza nezvinangwa zviviri: kona yakakura uye lens yefoni. Apple yakafunga kusarudza kutora iyi tekinoroji sechinhu chinosiyanisa cheiyo 4,7-inch modhi mukuwedzera pakutevera maitiro ekushandisa maviri makamera mune mafoni. LG, Huawei, Oppo ndevamwe vevagadziri vanga vachitove vachipa michina miviri yemakamera pamusika kwemwedzi mishoma. Kubva Chishanu chapfuura, vazhinji ndivo vane rombo rakanaka vari kutonakidzwa neiyi modhi nyowani iyo, sekureva kwaApple, ichatibvumidza kutora mifananidzo yakanaka.
Asi kudzamara tazozviona zvichiitika, hatizokwanise kuongorora kana chirevo ichi chiri chechokwadi kana iri tagline chaiyo yavakataura panguva yese yekuratidzira. Safwan Ahmedia, pane yake YouTube chiteshi SuperSaf TV, akaita fananidzo umo isu tinogona kuona mukuita uye panguva imwechete iyo kamera yeiyo iPhone 7 Plus uye iyo yeSamsung Galaxy Note 7.
Muvhidhiyo iyo yatinokuratidza pamusoro iwe unogona kuona mhedzisiro yekuenzanisa. Mukuenzanisa uku zvese zviri zviviri kurekodha vhidhiyo, pamwe nemifananidzo masikati machena kana munzvimbo dzakaderera mwenje senge mune akawanda maficha iyo Galaxy Note 7, tinogona kuona kuti anokunda uyu fananidzo ndeyei Samsung modhi. Iyo iPhone 7 Plus ine aakutsikisa mapikicha zvakanyanyisa, mukuwedzera pakuita ruzha rwakanyanya mumifananidzo mune mwenje wakaderera uye uine mashoma akasimba renji.
Zvakare Samsung zvakare inodarika iyo iPhone mukamera mhando. Mushure mekutanga kweSamsung S7 Edge, kutanga kwegore rino, iyo S7 kamera yakawanawo, uye nekure, iyo iPhone 6 Plus kamera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Kamera kuenzanisa pakati pe iPhone 7 Plus uye Galaxy Note 7
Pane chinhu chimwe chete chekuchengetedza mupfungwa: iyo software yeiyo mbiri kamera haisati yaburitswa parizvino, vakati izvo muKeynote. Icho hafu yekuenzanisa.
Izvo zvisati zvaturwa nazvino isarudzo yekukanganisa kumashure. Izvo hazvina chekuita nehunhu uko iyo iPhone 7 inorasikirwa zvakanyanya.
Pindura Juan Luis
Zvino edza kumwe kuenzanisa uko pro-droid ye supertonto isiri iyo inoita vhidhiyo, zvinoshungurudza kuti Samsung inogara ichikandwa sei, asi izvo zvandisingatsanangure ndemabatiro ausina kucherechedza.
Tsvaga internet uye uchaona kuti haasi iye ega anoti kamera yeCherechedzo 7 iri nani. YouTube izere.
Anenge ese makomendi ari mumaforamu akasarudzika anoti mwedzi mishoma yapfuura iyo Dual kamera uye vaive mukukanganisa makore apfuura lg akaburitsa nharembozha ine makamera maviri kutora mafoto kana mavhidhiyo kana ini ndisina kushata mu3d uye kupi htc mashizha ini ne m8 ndiye akafanotungamira macamera maviri, chinhu chega chakakundikana yaive resolution ye ultrapixel, ndatenda
Izvo hazvidikanwe kuenda kune ewebhu fan fan Musiyano mumifananidzo unonyatso kuoneka, zvakare kujeka pane iphone uye nekurasikirwa neruvara. Musiyano wakakwirira kwazvo paSamsung. Pamutengo weiyo iphone nyowani, mhando yemifananidzo yacho inofanira kunge yatove yakanaka
Ini ndinoda mapikicha egalaxi zvakanyanya, zvirinani mumufananidzo wepositi, iyi inotaridzika zvirinani kuravira kwangu, asi nokutendeka inonditsvedza, ini handisi mutori mifananidzo, ndakatenga iyo 7 zvakadaro
Bvisa muhwina iyo Kumbuka 7. Apple, wandinyadzisa zvakare. Dai iwe wanga uchitsvaga yakanaka kamera (kunyanya pane iyo mbiri lens Plus) saka ndinofunga watadza.
Iye anokunda isamsung? Ini ndinozviburitsa kunze! Kana kunyangwe mumufananidzo wawakaisa pabutiro zviri pachena kuti iphone iri nani! Mavara ari nani, mwenje uri nani, nezvimwe, zvakafanana nemuvhidhiyo.
Asi kana chapiswa, ndinoshamisika.
Iwe une shoma zano rekutora mifananidzo pane iyo yeququum yefizikisi ...
Ini handikwanise kuenzanisa nekuti ini ndaisazoshandisa peni paSamsung, asi chandingati ndechekuti kutora pikicha ne iPhone, uye ini ndoti chero imwe, ndiyo nzira yaunozviita nayo nezvose zvainazvo, saka ... kana chiri chekungotarisa uye kupfura icho, zvinogona kuitwa neshell mobile iyo isina basa 😉
Asi fananidzo yacho inoita senge isinganzwisisike kwandiri, hatitomboziva kuti imwe pikicha yakatorwa sei uye imwe, uye ini ndinoomerera, nekuti zvinoenderana nekuti zvakaitwa sei.
Hahaha Haisi nyaya yekubatirira pane irinyore kuravira kweApple muchidimbu, noti 7 inotora mifananidzo iri nani. Ini ndiri shasha yeApple uye ndagara ndichida zvigadzirwa zvemaapuro kune zveSamsung, asi maitiro ekudzivirira isinganzwisisike "Chete nezvisina maturo"